SHT Multilayer Zirconia Block -saareyaasha - Shiinaha SHT Multilayer Zirconia Block Factory & Shirkado cusub
Multilaye Laboratory Ilkaha ...
Super Translucency 57% Hore ...
Yucera 1200MPa streing Laab ...
Yucera ilkaha ST zirconia ...
YUCERA agabka ilkaha iyo soo-saareha qalabka zirconia multilayer-hooska
YUCERA SHT block multiconer zirconia waxay leedahay transluceny super, midab badan iyo xoog foorarsasho aad u fiican. Xannibkan zirconia multilayer waa kan ugu fiican sidoo kale qiimihiisu badan yahay ziconia multilayer ziconia ee suuqaaga ka dib isbeddelka oo ku habboon dhammaan CAD/CAM iyo nidaamka gacanta.
Xirmooyinka/meelaha bannaan ee zirconia waxay la jaan qaadayaan noocyada kala duwan ee nidaamka CAD/CAM iyo nidaamka gacanta, sida nidaamka Zircon, nidaamka sirona Inlab, nidaamka Kavo, nidaamka Amann Girrbach, iyo nidaamka Porland, iwm.
3D Multilayer Monolithic Zirconia Bank Milling Milling Machine Isticmaalka Kala -guurka Midabka Dabiiciga ah, Looma Baahna Dheeh
zirconia blocksare oo laga sameeyay nanometer budada zirconia budada. Budada waxaa marka hore lagu ciriiriyey qabow qabow oo cadaadis sare leh ka dibna horay loo qoofalay ilaa heer si loo bixiyo farsamayn wanaagsan.
Baakado badan oo loo yaqaan '3D multilayer zirconia blocks' ayaa loo isticmaali karaa in lagu abuuro taajyo, buundooyin, dhejisyo iyo dhejisyo ilko go'an oo go'an oo leh heerar kala duwan iyo midabyo kala duwan.